Oh.. My Blog!: June 2007
Posted by Tesla at 6:10 AM | Links to this post
Posted by Tesla at 2:02 AM | Links to this post
ဒါ.. ရဲရင့်မှုအတွက် သက်သေ…
လှပစွာ ၀ဲပျံနိုင်မဲ့ အတောင်ပံတွေကို ရိုက်ချိုး..
အမျိုးတွက် အားလုံးကို စတေးခဲ့ပေ…
ဒါ.. သစ္စာရှိမှုအတွက် သက်သေ…
ဣနြေ္ဒရရ လျှောက်လှမ်းလို့.. ခြေလှမ်းရယ်မှမယိုင်..
ငြိမ်းချမ်းရေး မိန့်ခွန်းခြွေလို့ စုစည်းခဲ့ပေ..
ဒါ.. ခေါင်းဆောင်ကောင်း ပီသတဲ့ သက်သေ….
ပြုလုပ်ထိုက် မထိုက် ခွဲခြား..
အရိုးကျေ ပစေ အရေခန်း ပစေ သက်စွန့်ကြိုးပန်းနေခဲ့တာတွေ…
ဒါ.. အာဇာနည်ပီသတဲ့ သက်သေ…
အသက်ရာကျော် ရှည်ပေးပါတော့ အမေ……
Posted by Tesla at 12:15 AM | Links to this post
ဟိုး.. ရှေးရှေးတုန်းက ဇီးကွက်ကြီးတကောင်ဟာ တောကြီးတတောရဲ့ ရေကန်လေးနားက သစ်ပင်ပေါ်မှာ နေထိုင်သတဲ့- ဇီးကွက်ကြီးဟာ ပညာရှိကြီးလို့ တတောလုံးက ၀ိုင်းသတ်မှတ်ထားတော့ လောကကြီးကို တရားကျတဲ့စတိုင် နဲ့ နေ့ခင်းတောင် အပြင် မထွက်တော့ဘူးတဲ့- ညရောက်မှ ဆင်းရဲစရာကောင်းတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို မဖြည့်ချင်ဖြည့်ချင် ဖြည့်ရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ အသက်ရှင်ယုံလောက် အဆာကိုသာ ထွက်ပြီး ရှာဖွေစားသောက်သတဲ့- အဲ့ဒီရေကန်ကြီးထဲမှာ ရေချိုးလိုက် အတောင်ပံလေးတွေခတ်ပြီး ကခုန်ပျံလွှားလိုက် နဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနေတဲ့ ဘဲငန်းမလေး တကောင်လည်း ရှိနေခဲ့တယ်- ဟော မောင်ညီမလေးတို့ရေ သေသေချာချာနားထောင်နော် ဇာတ်လမ်းစတော့မယ်-
အဲ့ဒီမှာ စတွေ့တာပေါ့ကွယ်- ရေကန်ကြီးနားမှာလေ- တနေ့တနေ့ ဖြူဖွေးလှတဲ့ အတောင်ပံတွေ နဲ့ ဆော့ကစားနေတဲ့ ဘဲငန်းမလေးကို ဇီးကွက်ကြီးက ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ပြူးပြီးသား မျက်လုံးတွေ ထပ်ချဲ့လို့ စူးစူးရဲရဲ ချောင်းကြည့်နေခဲ့သတဲ့ကွယ်- တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကိုဇီးကွက်ပေါ့- ဘဲငန်းမလေးကလည်း သူ့ကို ချောင်းကြည့်နေတာကို ရိပ်မိတယ်တဲ့- ဒီလိုနဲ့ပဲ ဘဲငန်းမလေးဟာ စူးစူးရဲရဲ မျက်လုံးကြီးတွေကို မလန့်ပဲနဲ့ ရင်ခုန်သွား မိသတဲ့- မိုက်မဲလှတဲ့ ငန်းမလေးများလားကွယ်- ရှည်ပါတယ် မောင်ညီမလေးတို့ရယ် အကျဉ်းချုပ်ရရင် ဇီးကွက်ကြီးနဲ့ ဘဲငန်းမလေးတို့ ဟာ တဦးပေါ်တဦး မေတ္တာမျှသွား ကြသတဲ့-
မေတ္တာမျှတော့လည်း ပေါင်းဖက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပဲ ခပ်လွယ်လွယ်ယူဆကြပေါ့ကွယ်- ခပ်လွယ်လွယ် ထပ်ယူဆရရင် တလလောက်လွယ် သုံးဆယ့်ငါးရက် လောက် ဥဘို့ အထိ ငန်းမလေးဟာ မပေါ့မပါးဖြစ်သွားရှာသတဲ့- (ပုံပြောတဲ့ ဦးဦး ဒီနေရာမှာ နည်းနည်းလွန်ပြီထင်ရင် ခွင့်လွတ်ပါကွယ် အမှန်တော့ငန်းတွေ ဘယ်နှစ်လလွယ်ပြီး ဘယ်နှစ်လဖွားတယ် ဆိုတာ ဦးဦးလည်းသိဘူး ရွီးလိုက်တာပါကွယ်)- ကဲ ကဲ .. ဇီးကွက်ကြီးက ကောက်ရိုးတွေ အရွက်စလေးတွေ ရှာပေးခဲ့လို့ ငန်းမလေးဟာ ခပ်မြန်မြန်ပဲ အသိုက်ကလေးရသွားပါသတဲ့- ရသွားတော့ ဥသည်ပေါ့ကွယ်- ဇီးကွက်ကြီးကတော့ ဘယ်တော့မှ အပြင်မထွက်တဲ့ နေ့ခင်းမှာတောင် အညောင်းဆန့်သလိုလို အတောင်ဖြန့်တာ လေ့ကျင့်သလိုလို နဲ့ အသိုက်နားမှာ ရစ်သီ ရစ်သီ လုပ်ပြီး ရင်တွေဘာတွေ ခုန်လို့ပေါ့- ဟော ဥပါပြီတဲ့- ခြောက်လုံးတောင် ဥသတဲ့ကွယ်- ငန်းမလေး စိတ်ကြီးတယ်- ဇီးကွက်ကြီးကတော့ ဥတွေကြည့်ပြီး ရင်ခုန်နေတာပေါ့- မသိရင် သူကိုယ်တိုင်ပဲ ဥထားတာလိုလို နဲ့ပေါ့- အင်း.. အကောင်ပေါက်ဘို့ ငန်းမလေးဟာလည်း ခါတိုင်းလို မဆော့နိုင်ပဲနဲ့ သည်းကြီးမဲကြီး ၀ပ်သတဲ့- ဇီးကွက်ကြီးကတော့ ရန်များကို ကိုယ်ရှင်းမယ် ဆိုတဲ့ တေးသွားအလိုက် နဲ့ လေတချွှန်ချွှန် ရင်အုပ်ကြီးကားပြီး ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက် (အဲ ဟိုပျံဒီပျံ) စောင့်ရှောက် နေခဲ့တာ နာရီမိနစ် စက္ကန့်မလစ်ပေါ့လေ-
အော်- ၀ပ်တော့လည်း ပေါက်သည်ပေါ့- လက်သယ်တောင် ခေါ်စရာမလိုပဲ ရှောရှောလျှူလျှူ ပေါက်သွားတာ ငန်းသေးသေးလေးတွေ ခြောက်ကောင် တောင်မှတဲ့- အဲ. အဲ့မှာ ဇီးကွက်ကြီးက နည်းနည်းလေသွားတယ်- ဘာဖြစ်လို့ ငန်းတွေချည်းပဲ ပေါက်ရတာလည်းပေါ့- မသကာ ဇီးကွက်တကောင် လောက် ပါရင်တောင် မဆိုးဘူးပေါ့- အဲ.. မှန်မှန်ကန်ကန်ကွာ ဇီးငန်း လိုမျိုး အကောင်အသစ်လေး တွေကောဘာလို့ မပါသလဲပေါ့လေ- ငန်းမလေးကတော့ လည်ပင်းရှည်ရှည်ကြီးရမ်းလို့ အတောင်ပံတွေကို ခပ်နိမ့်နိမ့် မြင့်တင်ပြီး ဒါတော့ ကျမလည်း မပြောတတ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့ကွယ်- အင်း.. ဇီးကွက်ကြီးကလည်း ထားပါကွယ် အမှန်တော့ သူ့သွေးသားတွေပဲ သူအရမ်းချစ်ပါတယ် ဆိုပြီး ဘဲငန်းမလေးရဲ့ နဖူးကို ခပ်ဖွဖွနမ်းရင်ပြောသတဲ့- (အဲ.. သူတို့နှစ်ကောင်ထဲ နားလည်တဲ့ အပြာရောင် ဘာသာစကားတခုရှိတယ် ဆိုတာ မောင်ညီမလေးတို့ကို ပြောခဲ့ဘို့ မေ့နေတယ်)
အဲ့လိုနဲ့- ဘယ်နားရောက်သွားပြီလဲ- အော်သိပြီ- ငန်းသေးသေးလေးတွေ တောင် ငှက်နို့သောက်ပြီး တဖြည်းဖြည်း ငှက်လား မြောက်လာခဲ့တယ်- (ဦးဦးကို ပြန်မငြင်းနဲ့ ဟိုးအရင်တုန်းက ငန်းတွေက နို့တိုက်သတ္တ၀ါပေါ့ကွယ်- အခုမှ သွေးအေးတဲ့ သွေးနွေးသတ္တ၀ါဖြစ်သွားတာ ဘာလြို့ဖစ်သလဲ သိချင်ရင် ဆက်နားထောင်) အတောင်ပံတွေ စုံတော့လည်း အပြင်ထွက်လာနိုင်တာပေါလေ့- အဲ့ဒီ ရက် ရောက်တော့ ငန်းမေမေကြီးက ငန်းသားသား ငန်းမီးမီးလေးတွေခေါ်ပြီး ဒီနေ့ ရေထဲဆင်းကြမယ်ဟေ့ ပေါ့- ဇီးကွက်ကြီးကလည်း အူကြောင်ကြောင်နဲ့ လိုက်သွားတာ ရေထဲရောက်မှ ဖလူးဖလူးနဲ့ ပြန်တက်လာခဲ့ရသတဲ့- သူမှရေမကူးတတ်တာ- ငန်းမလေးက တချက်တော့ လှမ်းကြည့်သတဲ့- ဒါပေမဲ့ ငန်းသေးသေးလေးတွေကို သင်ပေးဘို့တာဝန် ရှိသေးတယ်မလား- ဆက်ပဲ ကူးခတ်နေခဲ့တယ် ငါးတွေကို ဖမ်းနည်း သင်ပေးတယ်- သူကိုယ်တိုင်ဖမ်းပြတယ် အဆာကြွေးတယ် ပါးစပ်ထဲထိ ခွန့်ကြွေးတယ်ပေါ့- ဇီးကွက်ကြီးကတော့ ကန်ဘောင်ပေါ်ကနေ တွေတွေကြီး စိုက်ကြည့်နေခဲ့တာ အရုပ်ကြီးလားတောင် ထင်ရသတဲ့- ညာဘက်မျက်လုံးကတောင် မျက်ရေတွေကျလို့ ငန်းမလေးက ဘာဖြစ်နေလဲ အော်မေးတော့ နေ့ခင်းဘက်ဆိုတော့ မျက်စိစူးလို့ မျက်ရေထွက်တာပါကွာ လို့ပဲပြန်ပြော နေခဲ့တာပေါ့- နည်းနည်းရိပ်မိတဲ့ ငန်းမလေးက ငါးတကောင်ရတော့ ကုန်းပေါ်ကို ပြစ်တင်ပေးလိုက်တယ်တဲ့- ချစ်တယ်ပေါ့လေ အထာက- ဒါပေမဲ့ ဇီးကွက်ကြီးက ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပါတဲ့ ငါးကိုတောင် မစားတတ်တော့ တွေတွေကြီးစိုက်ကြည့်နေခဲ့တာ ဟော တောင်ကြားထဲကိုတောင် နေလုံးကြီး ပြုတ်ကျ သွားပြီကော-
အဲ့လိုနဲ့ နောက်မကြာခင်ရက်မှာပဲ ငန်းမေမေကြီးက ဒီနေ့ လေဟုန်စီးခြင်း အတတ်ပညာကို သင်ပေးမယ်လို့ ပြောသတဲ့- ငန်းသေးသေး လေးတွေကလည်း… ဟေး… လို့ ၀ိုင်းအော်ကြတာပေါ့- ဇီးကွက်ကြီးက ဒီတချီတော့ ငါပါပြီဆိုပြီး အားကိုးရတဲ့ ဖခင်တယောက် ပုံစံမျိုးနဲ့ ခန့်ခန့်ထည်ထည်ကြီးပေါ့လေ- မာနကြီးနေလိုက်တာများ ပိတ်မရတဲ့ မျက်လုံးတွေကို အတင်းဆွဲပိတ်လို့တဲ့- အတောင်ပံတွေတောင် တဖြတ်ဖြတ်ခတ်ပြနေသေးတယ်- အဲ့အချိန်မှာ ငန်းမလေးကလည်း အတောင်ပံဖြန့်မိတော့ ဇီးကွက်ကြီး ရိပ်ကနဲ သတိထားမိလိုက်တာက အတောင်ပံတွေဟာ သူ့ထက်ကြီးမား ကျယ်ပြန့်တယ်ဆိုတာပဲ- ခဏကြာတော့ ငန်းမလေးဟာ အပေါ်ကို ပျံတက်သွားတာများ အတောင်ပံတချက်ထဲပဲ ခတ်ပြီး ညိမ့်ခနဲပေါ့- ငန်းသေးသေးလေးတွေကလည်း နောက်ကလိုက် သွားကြသတဲ့- အဲ ဇီးကွက်ကြီးကတော့ စထွက်တာတောင် အတောင်ပံလေးခါလောက် ခတ်ပြီးမှနောက်က လိုက်သွားရသတဲ့- တဖြည်းဖြည်း မြေကြီးနဲ့ဝေးသထက်ဝေးအောင် ပျံကြတော့ လေဟုန်စီးလို့ရတဲ့ နေရာရောက်ကြတာပေါ့- ကဲ အဲ့ဒီအချိန် အတောင်ပံကြီးကြီးနဲ့ ငန်းတွေက လေ အရသာခံနေကြသလောက် ဇီးကွက်ကြီးက သူ့အတောင်ပံ သေးသေးလေးတွေကို တဖြတ်တဖြတ်ခတ်နေရတာ ပြုတ်ထွက်တော့မလားလို့တောင် သူ့ကိုယ်သူ ထင်နေခဲ့တယ်- တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဘယ်လိုမှမရတော့တဲ့ အခြေနေရောက်တော့ ဇီးကွက်ကြီး ဟာ အားမတန်လို့ မာန်လျော့ သူတို့ပဲ ပျံသန်းကြပါစေတော့ ဆိုပြီး နောက်ပြန်လှဲ့ခဲ့ရသတဲ့-
အင်း.. အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အဲ အပင်ပေါ်ပြန်ရောက်တော့ ဇီးကွက်ကြီးက စဉ်းစားသတဲ့ ငါဟာ တတောလုံးက ပညာရှိလို့ သတ်မှတ်ထားကြတဲ့ ဇီးကွက်ပဲ ဒါလေးတောင် အဖြစ်ရှိအောင် မလုပ်နိုင်ဘူးလား ဆိုပြီး တွေးရင်း အော် ငါလိုနေတာ အလေ့အကျင့်ကိုး ဟုတ်တယ် ငါလေ့ကျင့်ဘို့လိုတယ် ငါကြိုးစားရင်ရမှာပါ ငါလည်းမစဉ်းမစား ထုံထိုင်းနေတဲ့ကောင်မှ မဟုတ်ပဲဆိုပြီး လေဟုန်စီးဘို့ရယ် ရေကူးသင်ဘို့ရယ် ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တဲ့- စိတ်ဓါတ်တွေက ပြန်ပြီး ကြွတက်လို့ပေါ့ကွယ်- အဲ့လိုနဲ့ ညရောက်တော့ ငန်းမလေးကို ပြောလိုက်သတဲ့ မနက်ဖြန်ကစပြီး သူ့ကိုရေကူး သင်ပေးပါဆိုတဲ့ အကြောင်းပေါ့- ငန်းမလေးကတော့ ဘာပြောမှာလည်း အင်းအင်း ပေါ့လေ-
မနက်ခင်းရောက်တော့ ရေကန်ထဲကို မိသားတစုလုံး ပျော်ပျော်ပါးပါး ထွက်ခါလာကြတာ ဇီးကွက်ကြီးကတော့ ရင် တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေတာ သိမှာဆိုးလို့ အတောင်ပံတွေကြားမှာ နှလုံးသားကို ၀ှက်ပြီးလိုက်လာခဲ့ရတာပေါ့- ကဲ ရောက်ပြီ. ရေကန်ထဲ. ငန်းသေးသေးလေးတွေက ဘေးကနေ ဖေဖေကြီး ဖေဖေကြီး အဲ ပါပါး.. အာ ဘယ်လိုခေါ်သလဲ ဦးဦးလည်း မသိတော့ဘူးကွယ်- ၀ိုင်းအားပေးနေကြတယ် လို့ပဲ မြင်ယောင်ကြည့်ပေါ့- ငန်းမလေးက အရင်ဆုံးရေထဲ ဆင်းပြီး ဒီလိုလုပ် ဟိုလိုလုပ်ပေါ့လေ ပြသတဲ့- ဇီးကွက်ကြီးက ရေထဲကို ခြေတလှမ်းအရင် ချလိုက်တယ် အောင်မလေးလို့ အော်မိတော့ မလို့ပဲတဲ့- ကြက်သီးတွေက လဲထလို့ တော်သေးတယ် အမွှေးတွေပါလို့ တခြားလူတွေ အဲ တခြားအကောင်တွေ မမြင်တာတဲ့- ဒါပေမဲ့ပေါ့လေ ယောက်ကျားမာန (အဲ.. အထီးမာနလား) ကို အစွမ်းကုန် မြင့်တင် အချစ်ရဲ့အားမာန်တွေနဲ့ မျက်စိမှိတ်ပြီး ရေကန်ထဲဆင်းလိုက်တော့တယ်- ဒါတောင် ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် အတောင်ပံတွေကို ခတ်မိသေးတယ်- ငန်းမလေးက အဆင်ပြေလား လို့မေးတော့- အင်း.. တဲ့- ရေထဲနည်းနည်း မြုပ်သွားတယ်- ငန်းမလေးက အဆင်ပြေလား လို့ ထပ်မေးတယ် အင်းလို့ပြန်ပြောတယ်- တဖြေးဖြေးသူ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ဇီးကွက်ကြီးက သိလာတယ် ဒါပေမဲ့ ငန်းမလေးရဲ့ မျက်လုံးတွေကို ကြည့်တယ် ငန်းသေးသေး လေးတွေရဲ့ အသံတွေကို နားထောင်တယ် ရေထဲကိုတော့ တ၀က်ကျော်ကျော်မြုပ်နေပြီ- ပေါ်အောင်လုပ်လို့ မရသေးဘူး- အဆင်ပြေလား လို့ ထပ်မေးတယ် အင်းလို့ပြန်ပြောတယ်-နောက်ဆုံးအင်းလို့ ထပ်ပြောတဲ့ အချိန်မှာ ရေသံတွေ ရေနဲ့လေပေါင်းထားတဲ့ အသံတွေ ထွက်လာတယ်- ရေအောက်ရောက်သွားတယ် အဆင်ပြေလား လို့ ထပ်မေးတယ်- ပလုံ ပလုံဆိုတဲ့ အသံထွက်လာတယ်- ငန်းမလေးက အင်းလို့ပြန်ဖြေတယ် လို့ထင်နေတယ်- ဇီးကွက်ကြီးကတော့ ဟိုးရေအောက် ထဲထိရောက်တော့. အော် အမြင့်မပျံနိုင်ပေမဲ့ သူတို့မရောက်နိုင်တဲ့ ရေအောက်ခြေထိ ငါရောက်နိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အတွေးရယ် ငန်းမလေးရဲ့မျက်လုံးတွေရယ် ငန်းသေးသေးလေးတွေရဲ့ အော်သံတွေရယ် အကုန်ရောထွေးပြီး မြင်လိုက်ကြားလိုက်. မမြင်တချက်မြင်တချက် နဲ့ လေပူဖောင်းလေးတွေကပဲ ပါးစပ်ထဲက ပလုံစီပြီး တက်လာကြသတဲ့- ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲကွယ်- ဇီးကွက်ကြီးလား. ဇီးကွက်ကြီးက သေသွားတာပေါ့ကွယ်- ဟင့်အင်း.. ငန်းမလေးကြည့်ရတာ သိပ်သတိရတဲ့ပုံမပေါ်ဘူး မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပဲ-
Caroline Leaf ရဲ့ The Owl Who MarriedaGoose ဆိုတဲ့ Short Film Animation ကိုမှီငြမ်းရေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်- အဲ့ဒီလင့်မှာ ဗွီဒီယိုလေးလည်း ပါပါတယ်- ကျနော်အင်မတန် ကြိုက်ပါတယ်- အဲ ကျနော်ရေးထားသလိုတော့ ပေါကြောင်ကြောင် မဟုတ်ပါဘူး- မကြည့်ဘူးသေးရင် သွားကြည့်လိုက် ကြိုက်မှာပါ-
Posted by Tesla at 2:36 AM | Links to this post
ပလူတိုဂြိုလ်ကို ဂြိုလ်ကြီးကိုးလုံးထဲ ပြန်ထည့်စေချင်တယ်…
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ ပိရိစွာ ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ ကလကာနောက်မှာ
ဘယ်တော့မှတည်ခင်းဧည့်ခံမှာ မဟုတ်တဲ့ မျက်ရည်တချို့ဟာ..
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ၀မ်းနည်းစွာ အကျဉ်းချခံရတယ်…
သံစဉ်မပါတဲ့ အသံတွေကြောင့် ထကြွလို့..
တခါတခါများဆို နှလုံးသားက နွမ်းနွမ်းခခနဲ့ ထပြီးတောင်ကတယ်…
သြော်.. ခရေပင်ကြီးအောက် ခရေပန်းအကျစောင့်ရင်း
၀ုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်း ပြုတ်ကျလာတာ ငါပါလား..
ခရေကပဲ ငါ့ကိုပြန်ကောက် သွားတော့တယ်…
ဟောဒီမှာ အတောင်ပံတစုံ ယူသုံးပါ..
ငါ့နှလုံးသားကို တစစီဖြုတ်ပြီး ယက်လုပ်ထားတယ်..
ကဲ.. ငါဟာဝလုံးမရေးတတ်လို့ ငှေးမှိုင်ကျန်ခဲ့တဲ့ ရွှေခဲကြက်တူရွေးပေါ့
ညီလေးခင်ရေ.. လှည့်ကြည့်မနေနဲ့.. စာကြည့်ပျက်တယ်…..
Posted by Tesla at 11:33 PM | Links to this post
Posted by Tesla at 3:30 AM | Links to this post